> Resource > Video > Sida loo Play WMA kasta oo ku iPod Si fudud
iPod waa mid ka mid ah ciyaartoyda music shakhsi ugu isticmaalay adduunka oo dhan. Haddii aad qabto mid ka mid ah, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad wax ku tuuraan nooca file maqal ah waxa ugu Raaxo waqti kasta iyo meel kasta. Si kastaba ha ahaatee, ma si toos ah aad ka ciyaari kara WMA on iPod, qaab WMA la abuuray by horjeeda ugu weyn ee Apple ayaa, Microsoft. Waxaad si loogu badalo WMA in qaab iPod ah socon adigoo isticmaalaya WMA xirfadle in Converter iPod. Marka la eego in inta badan files WMA (sida music iyo buugaag) waxay leeyihiin ilaalinta DRM, waxaa si xoog leh lagula talinayaa aalad awood iyo xirfad. Ha kartaa in aad loogu badalo files wax WMA ay ka mid yihiin DRM iyo WMA files DRM aan dawliga ahayn ah ee loo maqli on iPod effortlessly.
Taasi Wondershare Video Converter . Wuxuu ku siinayaa xal deg deg ah oo u fudud in ay kaa caawiyaan in aad loogu badalo labada files WMA ilaaliyo galmo iyo in iPod. Oo waxay qaab beddelidda ma ka dhigi doonaa wax khasaaro audio. Dadka isticmaala Mac, waxa kale oo aad isticmaali kartaa Converter Video for Mac inay si fudud oo dhaqso beddelid DRM-free files WMA in iPod for loo maqli karo.
Hagaha hoos ku tusi doona sida uu u ciyaaro file WMA wax ku iPod la version Windows ee app this. Laakiin ogow in howlgalka on Mac waa wax la mid ah in Windows.
1 WMA Load in WMA si Converter iPod
Tani WMA in iPod video Converter taageertaa jiitaa-iyo-dhibic. Sidaas, waxaad si toos ah jiidi kartaa files WMA deegaanka ka your computer si ay leeg- tahay diinta barnaamijkan ee. Isla markiiba, kuwaas oo files WMA ku daray in la soo bandhigi doonaa sida soo socota. Dabcan, aad dajiyaan karaa files WMA adigoo riixaya badhanka Add Files ee geeska bidix ee kore ee suuqa kala this.
2 Dooro MP3 ama qaab iPod sida wax soo saarka
Si aad u ciyaaro WMA files audio on iPod, waxaad u leedahay in ay doortaan iPod qaab socon sida qaab wax soo saarka. Sida la og yahay in dhan, MP3 lagu ciyaari karaa dhammaan qalabka, oo ay ku jiraan iPod. Sidaa darteed, MP3 waa doorashadaada. Waxa laga reebo, waxa jira ikhtiyaar kale oo aad u doorato. Taasi qaabka filaayo in iPod.
Marka hore, waxaad tagtaa Murayaad Qaabka Output dhinaca midig ee suuqa si guji image qaabka. Markaas, ee soo socda liiska qaabka wax soo saarka, waxaad dooran kartaa MP3 ka Qaabka> category Audio ama xulo model iPod ka Device ah> Apple category.
3 Beddelaan WMA in iPod
No arrinta noocan ah files WMA waxa aad dajiyaan in app, waayo, diinta, DRM ama DRM-free files WMA, barnaamijkan iyaga badali si iPod taageeray files iyo tirtirto ilaalinta DRM ah oo isku mar haddii kuwa ka jira.
Hadda, kaliya aad u baahan tahay in aad ku dhacay button badalo ee geeska hoose ee saxda ah ee interface ugu weyn this app ee. Markaas, taas WMA weyn in Converter iPod samayn doonaa shaqada nasasho kuu toos ah, iyo qaab beddelidda, si dhakhso ah ayaa waxaa dhammaan doona. Next, waxa kaliya ee la soo dhaafay aad u baahan tahay inaad samayso waa in la helo files wax soo saarka ay si toos ah adiga oo riixaya badhanka Folder Open kadib markii diinta, ka dibna iyaga lagu wareejiyo si aad iPod u madadaalada via u hagaagsan Lugood.